Maitiro ekuisa ma LED kuratidza
Kuti ugadzirise uye nekukurumidza kuisirwa, tevera nhanho dzinotevera dzakanyatsotsanangurwa maprotocol mukuremekedza kuzere kwekuchengetedza kwevanhu, kana yekumisikidzwa pamafacade kana matenga, asiwo kudzivirira kwechigadzirwa chacho.
1. Kusunungura uye kubata
Munguva yekuburitsa maitiro e LED makabati anofanirwa kubatwa nekuchenjerera kudzivirira chero kukuvara.Muchikamu chino, kutarisirwa kunofanirwa kutorwa kuti usakweva kana kurova mamodule anoumba chiratidziro.Kunyanya kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune maLED ari pamakona uye mativi emahwendefa, kudzivirira chero kurova munzvimbo idzodzo.
2. Kuiswa uye kuiswa kwe LED kuratidza
Kuti utange kukwira skrini, ma modules anofanira kuiswa padivi peumwe neumwe.Makabati ane, kumusoro uye lateral zvikamu, anchoring michina inobvumira kubatanidza zvose zvakadzika uye zvakadzika.
Iyo data wiring process inofanirwa kutevedzera zigzag kurongeka pakati pemakabati, nguva dzose kutanga kubva kune iri pazasi kuruboshwe.Iwo ma module anozobatanidzwa kune data mukati uye data kunze port.Kutenda kune yedu sisitimu software isu tinokwanisa kuona iyo chaiyo wiring yescreen yese nemiedzo yakapusa.Pakupedzisira kunotevera kuenzana kwemavara uye kupenya kurongeka.
4. Simba rekupa
Simba wiring iri nyore kupedzisa kutenda kune inyanzvi yekubatanidza yakabatanidzwa muchiratidziro.
Led Display Led Screen Kunze Led Screen Led Sign Led Display Screen Kunze Led Display